Buhari - Obi Adịghị m Mma
Onyeisiala Muhammadu Buhari egosipụtala na obi gbara ya njọ banyere ogbugbu ahụ a na-egbu ndị mmadụ na Steeti Zamfara. Ọ mere ka a mara nkea ụbọchị Satọdee site n'aka onye enyemaka ya n'ebe mgbasa ozi dị bụ Bashir Ahmad. Buhari sịrị na ya bụ ihe mere obi ji alọ ya mmiri karịsịa ebe o metụtara ezinaụlọ ndị nke ya nwụrụ. Ọ gara n'ihu kọwaa ọnọdụ a dịka ihe jọgburu udele na njọ ma sigbukwa nkakwụ n'isi.
Anyị ga-amata na ndị omekome nọ eri oge debe Steeti Zamfara n'ọnọdụ ụra aga n'anya, ebe ọtụtụ mmadụ bụ ihe nwụrụ anwụ.
Na ngagharị iwe ha mere na Satọdee n'isi obodo ala anyị bụ Naijiria, a rịọrịọ ka onyeisiala gbata ọsọ enyemaka n'ebe nchekwa ndụ na akụnụba steeti Zamfara dị.
N'ihi nkea, ka ndị ọbịa bụ ndị na-arụ ọrụ ebe a na-egwupụta ihe na Steeti Zamfara bụ ndị enyere nanị awa iri anọ na asatọ (abalị abụọ) ka ha were si n'obodo ahụ pụọ dịka Gọọmenti Etiti na-ebido ibu agha nke ha ga-eji were kpochapụ ndị omekome na steeti ahụ. Ọnọdụ ibu agha bụ nke akpọrọ n'olu bekee "Operation Puff Adder".
Ibuagha a bụrị nke bidoro na izu ụka gara aga nke eji chụọ ọnọdụ ntọrọ mmadụ nke malitere n'okporo ụzọ ahụ si Abuja were gaa Kaduna.
Iwu a bụ nke enyere dịka ọtụtụ akụkọ na-arị ibe ya elu na Onyeisiala Muhammadu Buhari ji ọnọdụ nchekwa obodo were egwu egwu n'ọtụtụ mpaghara ala. Ọtụtụ kwukwara na oji ya were na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị.
Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party nọrọ n'akụkụ nke ha were sị na ọ bụrụ na ọlụ ahụ karịrị onyeisiala, ha kwuo ka amara ebe a ga-esi were kwa onye ukwu wara ma ọ bụ o tinye akwụkwọ alụkwaghịm. Ha gara n'ihu were dụọ onyeisiala ọdụ ka o lebaa anya nke ọma otú ọnọdụ nchekwa obodo a sịrị kwụrụ ma weta ụzọ tọrọ atọ kachasị mma a ga-eji were mee ka udo dị na Naijiria.
N'akụkụ ọzọ, dịka o siri na nzukọ nke ndị isi ọlụ nchekwa ala anyị dị n'aka mere pụta, onye na-alụ ọlụ dịka onyeisi ndị uweojii ala anyị, Maazị Muhammed Adamu kwuru na o nwere ihe dị omimi dị na-arụ ahụ ndị omekome na-akpa na igwupụta ihe ahụ na Steeti Zamfara. Nke a mere gọọmenti jiri buru ụzọ kwụsị ọrụ igwupụta ihe niile na-aga n'ihu na steeti ahụ ruo mgbe ihe niile dajuru ma dọzie ndị ọbịa niile aka ná ntị n'onye ọ bụla nke na-erubeghị isi ga-abụ onye a ga-anara akwụkwọ ikike ya.
O kwuru na-agha a bụ nke ndị ọlụ nchekwa ala anyị gụnyere ndị uweojii, ndị ọlụ agha na ngalaba steeti savici ga-alukọ ọnụ. Nke bụ nke ha ga-eji were merie ma napụta ndị omekome ahụ ebe ndị ahụ niile ha were ma nọrọ na-akpa mkpa mkpa.